Umceli mngeni woyilo: iiLogo ezingama-365 eziFihla intsingiselo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UDaniel Carlmatz unayo setha umngeni wokudala iilogo ezingama-365 abagcina imfihlo kubuchwephesha babo. Endaweni yoko, intsingiselo ngokungqinelana nelogo uqobo lwayo ukuze ibe lilogo ebetha kakhulu kwaye iyile kakhulu. Ngokukodwa kwezinye zivela ngendlela enomdla.
UCarlmatz ukhethe uthotho lwamagama ku nika ubume ngqo kuseto loonobumba okanye ukufihla loo ntsingiselo. Ayisiyonto inzima, nangona kungenxa yokuba ngesiNgesi sinokuthi siyiphose intsingiselo yabanye. Nangona kukho ubukrelekrele obuninzi obushiya umzila wokutsala umdla wethu.
Njengaleyo ine igama "ubunqunu" apho omnye wonobumba engenanto kwaphela, emele ngokugqibeleleyo intsingiselo yelogo. Okanye igama elithi "panda" apho imilo egobileyo yoonobumba inika eso silwanyana sincinci.
Owona mceli mngeni yenza iilogo ezingama-365 ezahlukeneyo Uvela kumbono wokucela umngeni kuye ekwenzeni uyilo kolunye uluvo. Njengokuba yayiligumbi elinye lomsebenzi apho iingcinga zakho zoyilo zinikwa inkululeko epheleleyo yokuziveza.
Iziphumo ziyaqhayisa ngaphandle kwamathandabuzo ngokulula kunye nobuchule bayo. Waqala ngamanye amagama awayesele enombono ocacileyo wendlela yokwenza ngayo ilogo ukuba aqale ukuqonda ukuba ezinye zinzima ngakumbi.
Igama elifanayo nePanda limthathe ixesha ngokuya ngokufanayo. Abanye sele benayo isisombululo ekuqaleni, ukuze afumane kuphela igama lokuxhasa eso sisombululo.
Sicebisa ukuba udlule kuzo Instagram ukufumana zonke iilogo nokunye fumana intsingiselo efihlakeleyo elowo kubo. Ngokuqinisekileyo uya kuba nexesha elihle kunye nemibono yalo myili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umceli mngeni weelogo ezingama-365 zomyili ogcina intsingiselo kuchwethezo lwabo
Irhafu kaDavid Bowie ebeka iNew Yorkers